I-RAISING-Elec esekwe kwi-2000 ibekwe kwiDolophu yaseHoujie, kwisixeko saseDongguan kwaye ineentonga ezingama-180 kunye nemizi-mveliso emi-2 ejikeleze i-10,000 yeemitha zesikwere ngoku. Singumenzi we-OEM / ODM ojolise ekugxininiseni isinyithi kunye nokuchaneka kunye ne-CNC, kwangaxeshanye, sikwanikezela ngeenkonzo ezixhasayo kwaye sinika inkxaso "yokumisa enye" ​​kubaxhasi kulo lonke uthotho lwesinyithi, njengokuphosa ukufa, izinto zokubopha, izikrufu nemithombo. Iminyaka engama-20 yamava emveliso yentsimbi kunye nenkxaso yamaqabane ekwenziweni kwesinyithi angaphezu kwe-100, sele siyingcali kwicandelo lesinyithi.
Ixabiso lokuhanjiswa kumthengi wethu
1.inokubonelela ngeenkonzo zokumisa zonke zonke iintlobo zeemveliso zesinyithi ezenziwe ngokwezifiso kubandakanya ukunyathela, ukwenza izinto ngomatshini, ukusasaza kufa, ukukhawulezisa kunye nentwasahlobo.
2.we unokulandela iimfuno zabathengi kunye neemfuno zokuyila ukungunda kunye neemveliso ngokukhawuleza.
3.we sinokunceda abathengi ukuba banciphise iindleko kwaye banciphise ixesha eliphambili.
4. Singacebisa abathengisi ngazo zonke iintlobo zezixhobo ukuba abathengi bafuna njalo
Kutheni UKHETHA UKUKHULA？
● 1. Ukukhulisa kunamava eminyaka engama-20 kwimveliso yesinyithi kunye namaqabane angaphezu kwe-100 esenziwe ngesinyithi, sinokubonelela abathengi bethu ngeengcebiso zobungcali kunye nokwenza ngcono umda wabo wokhuphiswano ngexabiso eliphantsi kunye nokunciphisa ixesha eliphambili.
● Sineeenjineli ezili-10 kwiziko lethu le-R & D, bonke banamava angaphezulu kweminyaka eli-15 kuyilo lokungunda.
● 3.Umgangatho woLawulo oluQinisekileyo: Ukukhulisa kudlulile kwi-ISO9001 kunye ne-IATF16949, sele sineminyaka engama-20 sinamava emveliso yentsimbi, singathanda ukufundisa iziseko zeenkqubo ezisemgangathweni ngokusetyenziswa kwezixhobo, senze abasebenzi bethu baqonde ngakumbi indlela yokuhlangana ukunyuka kokulindelweyo kunye neenjongo zomgangatho. Ngendlela, besineqela elipheleleyo lomgangatho kubandakanya i-IQC, i-IPQC, i-QE, kunye ne-OQC, kwaye silandela ulawulo olufanelekileyo lokuhlola iimveliso, ngaphambi kwemveliso emininzi, i-QA kufuneka yenze uvavanyo lwezinto ezisetyenziswayo, zonke iimveliso zebhetshi azinaNO ezizodwa ekulula ukuba ukulandelelwa ukuba kukho ingxaki eyenzekileyo. Inkqubo yethu eqhubekayo ye-PDCA inika abasebenzi bethu ithuba lokuba baziphucule abangazukuxhamla kuphela ngokunyusa kodwa nakubathengi bethu.
● 4.Ukuba sixhobile, sinomatshini bokunyathela, ukusika i-laser kunye nokugoba oomatshini, i-CNC yoNyango lobushushu, ukugaya kunye noomatshini bokucheba ucingo, i-welding-surface powder powder-Assembly-lines kunye njalo. , Ixabiso lokukhuphisana kunye nexesha elifutshane lokuhambisa kubathengi bethu.
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Izahlulo Ihowuliseyili, Plate Intwasahlobo, Izikrufu, Aluminium Cnc ngomshini Iintetho, Ukulahlwa kweMagnesium, Iimveliso zeSitayile seSinyithi, Zonke iiMveliso